Sina avo henjana 6061 6082 7075 2024 mombamomba ny aliminioma ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy fampiasana indostrialy | Huifeng
Hamafin'ny haavo 6061 6082 7075 2024 mombamomba ny aliminioma ho an'ny fampiasana indostrialy
Famaritana ny profil aluminium
Firaka: 2A12, 2014, 2014A, 2017A, 2024, 3003, 5083, 6005A, 6060, 6061, 6063, 6063A, 6082, 6463,
7020, 7075 sns
Tempera: O H112 T3 T351 T4 T42 T5 T6 T651
Endrika: toy ny saritan'ny mpanjifa
Fitsaboana ivelany, famaranana, anodized, sary hosodoko PVDF, famolahana
Fanoherana ny harafesina:
Ny hakitroky ny profil aluminium dia 2,7g / cm3 fotsiny, izay manodidina ny 1/3 amin'ny hakitroky ny vy, varahina na varahina (7.83g / cm3, 8.93g / cm3, avy eo). Eo ambanin'ny ankamaroan'ny toe-javatra iainana, anisan'izany ny rivotra, rano (na rano masira), petrochemicals ary rafitra simika maro, ny aliminioma dia afaka mampiseho fanoherana tsara harafesina.
Ny mombamomba ny aliminioma dia matetika no voafantina noho ny fitondra herinaratra tena tsara. Miorina amin'ny lanja mitovy, ny fitaritana ny aliminioma dia manakaiky ny 1/2 an'ny varahina.
Ny fitarihana hafanana an'ny firaka aliminioma dia manodidina ny 50-60% amin'ny varahina, izay mahasoa amin'ny fananganana mpivarotra hafanana, evaporator, fitaovana fanamainana, kojakoja fandrahoan-tsakafo ary lohan'ny varingarina sy taratra.
Ny mombamomba ny aliminioma dia tsy ferromagnetika, izay singa manandanja ho an'ny indostrian'ny herinaratra sy elektronika. Ny mombamomba ny aliminioma dia tsy mora may, izay zava-dehibe amin'ny rindranasa mifandraika amin'ny fikirakirana na ny fifandraisana amin'ireo fitaovana mora mirehitra sy mipoaka.
Ny fiasan'ny profil aluminium dia tsara. Amin'ireo aliminioma alimo marolafy sy alimo aliminioma isan-karazany, ary koa amin'ny fanjakana isan-karazany ananan'ireto alloys ireto rehefa vita ny famokarana, dia miovaova be ny toetra mampiavaka ny milina, izay mila fitaovana na teknolojia manokana.
Ny tanjaka manokana, ny tanjaka, ny fikojakojana ary ny tahan'ny fanamafisana ny asa mifandraika amin'izany dia mifehy ny fiovana amin'ny fiovana azo avela.
Ny aliminioma dia manana haino aman-jery avo be, ary ny toetra mampiavaka ny alimina namboarina dia saika tsy hay avahana amin'ny alimina voalohany.
1. Mombamomba ny aliminiônan'ny maritrano (mizara roa varavarana sy varavarankely ary rindrina ridao).
2. Mombamomba ny radiator an'ny aliminioma.
3. Jeneraly profil aluminium indostrialys: Ampiasaina amin'ny famokarana sy famokarana indostrialy, toy ny milina sy ny fitaovana mandeha ho azy, ny taolana misy ny vala, ary ny orinasa tsirairay dia manamboatra ny bobongolo mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mekanika manokana, toy ny fehikibo, mpanelanelana, mpaninjara, fitaovana fitiliana , talantalana sns, dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny milina elektronika sy ny efitrano madio.
4. Mombamomba ny firafitry ny alim-by ho an'ny firafitry ny lalamby: ampiasaina amin'ny fanamboarana ny vatan'ny fiaran-dalamby.
5. Mombamomba ny alimina alimina hanamboarana sary vita amin'ny firaka aliminioma, fametrahana sary hosodoko isan-karazany sy sary hosodoko.
Araka ny firafitry ny firaka
Azo zaraina amin'ny mombamomba ny aliminioma toy ny 1024, 2011, 6063, 6061, 6082, 7075, izay andiany 6 no be mpampiasa indrindra. Ny maha samy hafa ny naoty isan-karazany dia ny haben'ny metaly isan-karazany tsy mitovy, afa-tsy ny mombamomba ny aluminium matetika ampiasaina ho an'ny varavarana sy ny varavarankely, ohatra, ankoatry ny mombamomba ny aliminiônika maritrano toy ny andiany 60, andiany 70, andiany 80, andiany 90, andian-drindrina ambainy, piraofilina aliminioma indostrialy dia tsy manana fanavahana maodely mazava, ary ny ankamaroan'ny mpanamboatra dia manodina azy ireo arakaraka ny sary nataon'ny mpanjifa.
Araka ny fitsaboana any ambony
2. Aluminium mifono elektroforesis
3. Aluminium nopotserina vovoka
4. Aluminium famindrana voa
5. Fluorocarbon nofafazana alimo
6. Aluminium voadio
Ny "Jinan Huifeng aluminium Co., LTD" dia namboarina avy amin'ny orinasam-panjakana, miorina ao amin'ny "tanàna rose" any Chine - Faritra PingYing ao amin'ny tanànan'i Jinan, dia mirefy 600 hektara mahery, manana orinasa mpamokatra 3 sy orinasa iaraha-miasa io.
afaka mamokatra fantsom-boaloboka vita amin'ny aluminium isika, bara vita amin'ny aliminioma, fantsom-bokatra aliminioma, ary mombamomba ny aliminioma indostrialy, andiana firaka avy amin'ny 1xxx ka hatramin'ny 7xxx, temper O H112 H24 T3 T4 T5 T6 T8 T651 Etc.
Fitaovana fitrandrahana aliminioma ao anatin'izany ny 3600 taonina sy ny milina 2800 taonina, 1350 taonina 1300 taonina ary 880 taonina milina extruding miisa roa, milina extruding 800 taonina, 630 taonina milina fanondranana 500 taonina, milina fanitsiana fihenan-tsolika, tavy mihodina 11, milina fanaovana sary fantsona, milina fanaovana tsorakazo, lafaoro famonoana pataloha 400 KW, fitaovana an-tanety, anisan'izany ny lafaoro nitrida, lafaoro homogeneous, ary lafaoro mihantitra, valizy famolavolana induction matetika sy dobo famonoana oksizenina.
Izahay dia nandalo ny ISO9001, rafitra fanamarinana kalitao 2000, ary nanangana ny laboratoara fanandramana matihanina, fitaovana miaraka amin'ny mpandalina spectrum, tester am-pahefana CNC, mikraoskaopy manandratra avo, mpandidy hamafin'ny varotra, sns, miaraka amin'ireo mpiasa teknika mahay miaraka, mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra mahafeno tanteraka ny fitakian'ny mpanjifa.
Ny tanjon'ny mpividy fihaonana no tanjontsika foana. Manome tombony bebe kokoa antsika ny vokatra azo. Jinan Huifeng aluminium Co., Ltd dia mikiry hatrany amin'ny "fanomezana vokatra tsara indrindra mahafa-po ny mpanjifa, valiny haingana ary mpanjifa manome valisoa feno"
Teo aloha: Mpanamboatra kalitao 10-260mm 6061-t6 aluminium bara
Manaraka: Takela-by alimika 5083
profil aluminium ho an'ny rindrina ambainy
mombamomba ny aluminium anodized
mombamomba ny fananganana
profil aluminium indostrialy
mombamomba ny aluminium vita amin'ny herinaratra
roller shutter profil aluminium
Firaka OEM 6061/6082/6063/6005 indostrialy ...